‘मुख बन्द गर्ने मनसाय’
सरसरती हेर्दा जे देखिए पनि यो विधेयकको अन्तिम अभिप्राय सकेसम्म र आफ्नो लागेपुगेसम्म सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्ने हो। हामीकहाँ खुला विश्व भएकाले त्यसका बाध्यताहरू छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिलेको सरकारको अभिप्राय चाहिँ सकिन्छ भन्दै बन्दै गर्ने हो। त्यो झ्याउलो किन राख्ने ? घरी निर्मला भन्या छ, डाक्टर केसी भन्या छ, अर्को पशुपति भन्ने आउँछ गीत गाउँदै, साराले थपडी बजाउँछन्।
पशुपति शर्माको गीत झल्ला गीत हो। न त्यसमा कुनै वैचारिक गम्भीरता छ, न कुनै कला छ। त्यस्तो झल्ला गीतमाथि त्यसरी प्रतिक्रिया गर्ने भनको त डबल झल्ला भयो। पशुपति शर्माले गीतमा जे–जे भने, त्यस्तो त सम्भवतः सयौँ–हजारौँ पटक भनिएको छ। विद्वान्हरूले, प्राज्ञहरूले आफ्नो शास्त्रीय लेखमा शब्द फरक पारे होलान् तर अभिप्राय हजार पटक भनिएको छ। पशुपतिलाई नै किन समातियो ? छोरी कुटेर बुहारी तर्साइएको हो। यो प्रारम्भ हो। हामी यसो गर्न सक्छौँ भनेर देखाएको हो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वर्षदिन बित्यो। ओलीले निर्वाचनमा जाँदा अथवा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा लोकको अगाडि जे–जे वाचा गरेका थिए, वर्षदिनमा उनले केही पनि पूरा गर्न सकेनन्। पानीको फोकाजस्तो उनको ठूलो लोकप्रिय व्यक्तित्व थियो। त्यो पनि स्खलित भयो। तीन चार वटा घटना हेरौँ— निषेधित क्षेत्र घोषणा, गोविन्द केसी प्रकरण, निर्मला पन्त प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, पशुपति प्रकरण आदि। यी प्रकरण मात्र स्मरण गर्ने हो भने पनि ओली सरकारप्रति जनताको विश्वास सबै छिन्नभिन्न र ध्वस्त भएको बुझ्न सकिन्छ।
तर, ध्वस्त गर्‍यो केले ? मूलतः सामाजिक सञ्जालले। प्रिन्ट मिडियाको आफ्नो बृहत्तर भूमिका नभएको होइन। तर, तत्काल आवेग र उत्पात सिर्जना गरेको त सामाजिक सञ्जालले हो। यी घटनाबाट ओली सरकारले आघात महसुस गर्‍यो र आतंकित भयो। त्यो आतंकको प्रतिक्रियाका रूपमा यो विधेयक आएको हो।
विधेयकमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सवाल के हो भने फैसला गर्छ कसले ? राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा लेख्दा सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा त मानेकै कुरा हो। तर, कसैले त्यस्तो लेख्यो भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने फैसला गर्छ कसले ? सरकार आफैँले फैसला गर्ने भनेको आफूलाई मन नपरेको मानिसलाई दण्डित गर्ने हो।
भिन्न मत राख्ने र आलोचना गर्नेलाई दण्डित गर्नु खतरनाक कुरा हो। अलिकति नाम र प्रतिष्ठा भएकालाई यसले धेरै असर पार्दैन। किनभने, तिनको प्रतिष्ठा नै यस्तो शक्ति हुन्छ कि त्यसलाई सकेसम्म अरिंगाल सेनाले छुँदैन। छुने पशुपति शर्मा जस्तालाई हो। आम मान्छे जसको व्यक्तित्वको शक्ति छैन, जसको वरिपरि जनशक्ति छैन, सत्ता, बन्दुक र सम्पत्तिको शक्ति छैन। शक्तिहीन मान्छेको मुख थुन्न यो पर्याप्त छ। जब सामान्य मान्छेको मुख थुनिँदै जान्छ, बोल्नेहरू कम हुन्छन्। बोल्ने कम भएपछि आवाज कमजोर हुन्छ। आवाज कमजोर भएपछि आफूलाई बलियो ठान्नेहरू पनि आफूलाई सेन्सर गर्न थाल्छन्।
चीनबारे अझ पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन। तर, हामीले उत्तर कोरिया देखेका छौँ। हालै डा. सन्दुक रुइतको बायोग्राफी अनुवाद गरेँ। त्यो बडो चाखलाग्दो छ। सन्दुक रुइत उत्तर कोरियामा मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गर्न गए। अन्य देशमा अपरेसन गरेपछि जसको आँखा खुल्थ्यो, उनीहरू पहिला हर्षको आँशु बगाउँथे, भावविभोर भएर डाक्टरलाई अंकमाल गर्थे, रुन्थे, कतिपयले डाक्टरको पाउ छुन्थे।
उत्तर कोरियामा अपरेसनपछि जब उनीहरूले आँखा खोले, ह्वार्रै कुदेर गए। रुइत जिल परे कहाँ गएका हुन् उनीहरू ? उनीहरू त किम जुङ इलको विराट शालिकको पाउमा जम्मै लम्पसार परेर रोए। उनीहरू भने, ‘तिमीले गर्दा हाम्रो आँखाको ज्योति फर्कियो।’ यहाँ पनि हुने त्यही हो।
आम मान्छेको कान थुन्ने, आँखा बन्द गर्ने, बोली बन्द गर्ने अभ्यासको प्रारम्भ हो यो। समाजमा मालिक र दासको दुइटा क्याटगोरी निर्माण गर्ने अभ्यास हो। नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति, विश्व राजनीतिक परिस्थिति र नेपालको खुला अवस्थाले शासकले चाहेअनुसार नै गर्न त सक्दैनन् तर गर्न सकेको खण्डमा मुख बन्द नै गर्ने उद्देश्य हो।
फेसबुकमा लेख्दा विचार गर्नुस्, यी ३२ कसुरमा हुन सक्छ तपाईँलाई सजाय
सामाजिक सञ्जाल नियमन कति सजिलो ?
सामाजिक सञ्जाल बन्द भए के गर्नुहुन्छ ?